Ogaden News Agency (ONA) – UrurkaHaweenka Ogaadeeniya ee dalka Kenya oo gudi Cusub doortay
UrurkaHaweenka Ogaadeeniya ee dalka Kenya oo gudi Cusub doortay
Posted by ONA Admin	/ May 20, 2012
Ururka haweenka Ogaadeeniya ee dalka Kenya oo ah urur mudo dheer jirey ayaa maanta isugu yimid shir ay ku doorteen gudi cusub waxayna halkaas ku dhiseen nidaam maamul oo ururka haweenka Ogaadeeniya ee dalka Kenya uu yeelan doono.
Waxaa shirka ka hadalay Hooyo Sahro Ismaaciil oo ka mid ahayd xubnaha gudiga cusub ee ururka loo dhisay waxaana hadaladeeda kamid ahaa marwo Sahro Ismaaciil “dhamaanteen mas’uuliyad ayaa na saaran waana in aan gudanaa waajibkaas na saaran. Dhamaanteena xil ayaa naga saaran dadka iyo dalka Ogaadeeniya”.
Waxaa shirka haweenka ee maanta goob joog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan jaaliyadaha Ogaadeniya ee Scandinavianka mudane C/raxmaan goobe oo uu oogu horeeyo gudoomiyaha jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Norway oo khudbada guubaabo ah u jeediyey xubnahana ururka haweenka Ogaadeeniya ee dalka Kenya waxaana hadalkiisii kamid ahaa “Waa in loo diyaar garoobaa mustaqabalka fog oo la’isu diyaariyaa dalashada xornimada Ogaadeeniya. Hadii aad tihiin dumarka Ogaadeeniya waa in aad door fiican ka ciyaartaan hawsha halganka ee Geeska Afrika, waa in aad buuxisaan dhamaan boosaska la idiinka baahanyahay dhaqaalaha, abaabulka, daryeelka qoxootiga Ogaadeeniya”. Wuxuu ooga mahadceliyey haweenka Ogaadeeniya guud ahaan kaalinta ay ku leeyihiin halganka oo ah mid aan la dhayalsan karin.
Sidoo kale mas’uuliyiinta ka hadashay waxaa kamid ahaa ku xigenkan Hogaanka HAAB Mudane C/qaadir Gamdiid oo khubadan dheer ka ka jeediyey shirka isaga oo kaga qayeb qaadanayey khadka telefoonka wuxuuna Mudane Gamadiid u jeediyey xubnihii haweenka ee shirka joogay in ay ilaaliyaan nidaamka maamul ayna wax walba ka hormariyaan wadatashiga iyo ilaalinta nidaamka ururka.
Gabogabadii shirkana Waxaa soo xidhay gudoomiyaha Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Kenya Eng Axmed Saadiq isaga oo kula dardaaramay gudiga cusub in ay dardar galiyaan hawsha hortaala.